सृजना कोइरालाका एक दर्जन मुक्तकहरूः | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका सृजना कोइरालाका एक दर्जन मुक्तकहरूः – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
जस्तै पीडामा नि आँसु देखाइ, रुने छैन सानु
विषमतामा पनि मन अस्थिर, हुने छैन सानु
सिक्काका दुईपाटा बनी, सार्थक जीवन जिउनुछ;
कसैका भ्रमले कहिल्यै अन्तर्मन, छुने छैन सानु ।।
हजुरलाई त नेताज्यू, भोटको खाँचो भो
सुन्दर महलमा रम्ने, नोटको खाँचो भो
भूकम्पले चर्किएका, हाम्रा विक्षुब्ध मनहरू;
टाल्ने काममा सदैव, खोटको खाँचो भो ।।
दुःख किन जिन्दगीमा, गुणा हुँदै गए ?
सुख समिप हुनुपर्ने, आकाश छुँदै गए ।
भाविले नि लेख्ने विधि, पुर्याएनछ कि त;
जोड, घटाउको सन्तुष्टि, कता रुँदै गए ?
विरानो यो शहरमा जीवन, एक्लै तड्पिरहेछ ।
वाधा, व्यवधान झेल्दै, तिम्रै यादमा धड्किरहेछ ।
विसन्चो भई लड्दा पनि, सहारा छैन कसैको;
ऋण तिरी केही गर्ने, झिनो आशमै अड्किरहेछ ।।
तिम्रो दृष्टिकोणमा, खास नभए पनि
सुन्दर महलमा मेरो, बास नभए पनि
चलेकै छ जीवन, बलेकै छ चुलो यहाँ;
कहीँ कतै केहिमा, आश नभए पनि
दुःखमा नै रमाउने, बानी भो जिन्दगी
विवशताको भव्य, खानी भो जिन्दगी
जता जाउँ जे गरौं, सोचेभन्दा फरक;
खहरेको उर्लंदो, पानी भो जिन्दगी ।।
कम्ति बोले पनि मृदुभाषा, त्यसमै जय हुन्छ
उदार दिलले सहयोग गरे, सुगन्धमय हुन्छ
खाली हात नै जानुछ, तैपनि राख्छौ वैरभाव;
आखिर किन ? निवासमै, जीवन भय हुन्छ !
आफ्ना सन्तानको चाल देखि, रुन्छिन नेपाल आमा
बारम्बार आँसुले नै मुख, धुन्छिन नेपाल आमा
अस्तित्व नै जोखिममा पर्यो, भन्दै मुर्छित हुन्छिन;
पुनः सम्हालिंदै नयाँ सपना, बुन्छिन नेपाल आमा ।।
समयको बहावसँगै, नाचिरहेछ मानिस
धनदौलतको जोहो गरी सांचिरहेछ मानिस
अनभिज्ञ रहेको यो, दुई दिने चोलामा;
केहि गर्ने झिनो आशमै, बाँचिरहेछ मानिस ।।
हिजो मात्र भेटेको उसलाई, काले काले रहेछ
कुरा गर्दै गएको त, खुब दिल वाले रहेछ
असल मित्र बन्ने हामी, भन्थ्यो संधैभरि;
फेरि आज नै कुरा मोड्यो, नौ जाले रहेछ ।।